192.168.8.2 - Admin Login - Adeegsade Magac iyo Furaha ereyga
192.168.8.2 IP gaar ah ayaa loo hayaa si loo isticmaalo guddiga maamulka dariiqa. IP-yadaas & wax badan oo la mid ah 192.168.77.1, 192.168.123.1, 192.168.8.1, iwm waa heerar guud ahaan adduunka laga aqoonsan yahay oo loo yaqaan IP-yada router-ka. Suugaanta, xitaa waxaa loogu yeeraa "Default Gateway IP".
192.168.8.2 Soo gal
The http://192.168.8.2 Cinwaanka IP-ga waxaa ku taxan Hay'adda lambarrada loo qoondeeyey ee IANA ee Internetka qayb ka mid ah 192.168.8.0 / 24 shabakadaha fog. Meelaha gaarka loo leeyahay, cinwaanka IP-da looma wakiisho shirkad gaar ah qof walbana waa inuu adeegsadaa cinwaanka IP-ga iyada oo aan la isku raacsaneyn diiwaanka gobolka ee internetka sida lagu qeexay RFC 1918, oo ka duwan cinwaanka IP-ga ee dadweynaha.
Gal Bogga Maamulka
Kaliya qor 192.168.8.2 galay cinwaanka barta biraawsarka.
Miiska dushiisa, waxaad isticmaali kartaa bogga maamulka & sidoo kale waxaad hubisaa inaad gasho PW. Adiga oo gujinaya xiriirka 192.168.8.2 xitaa waad heli kartaa gelitaanka-ku yaal.
Sidoo kale, waxaad ka heli doontaa dhammaan natiijooyinka raadinta ee gaarka loo leeyahay 192.168.8.2 Cinwaanka IP.
Haddii aad dooneysid inaad kahesho soo galista xarig-la'aanta, router-ka, barta marinka, ama modem waad isticmaali kartaa adigoo si fudud u riixaya xiriirka HTTPS ama HTTP.
Inbadan oo ku saabsan 192.168.8.2
192.168.8.2 Cinwaanka IP-ga ayaa ku qoran liiska Maamulka Lambarka Lambarka Internetka IANA waa laan isku xir xiran 192.168.8.0. Meel gaar ah, cinwaanka IP-ga looma qoondeynin hal urur oo gaar ah, iyo sidoo kale ISP, qof walbana wuu isticmaali karaa cinwaanada IP-ka ah iyada oo aan la tixgelin diiwaanka internetka gobolka.
Markale, xirmooyinka IP-ga ee laga soo qabtay nooc shaqsi ah looma diri karo internetka la wadaago, sidaas darteedna haddii shabakad shaqsiyadeed ay rabto inay ku xirnaato internetka, waxay u baahan tahay inay ku guuleysato iyada oo loo marayo beddel cinwaanka isku xirka (xitaa loo yaqaan NAT) wakiil ama server albaabka Sawirka marinka NAT wuxuu noqon karaa router wireless ama fiilo leh oo aad ka heshid alaab-qeybiye weyn.
Tijaabinta tan waxaad u baahan tahay inaad gasho barta cinwaanka 192.168.8.2 biraawsarka aad doorbideyso ee la mid ah Mozilla Firefox ama Google Chrome & ku soo gal magaca isticmaalayaasha iyo waliba ereyada sirta ah ee uu ku siiyo alaab-qeybiyahaagu
Waxaad u isticmaali kartaa noocyada noocaas ah cinwaanada IP ee shabakadaha gaarka loo leeyahay ee shabakadahaaga maxalliga ah iyo sidoo kale waxaad ugu qaybisaa qalabka sida kiniin, PC, laptops, & Smartphones. Kooxda martida loo yahay ayaa iska leh aaladda 192.168.8.2 Cinwaanka IP.
Username & Password ee 192.168.8.2
Categories nidaamyada joogtada ah Post navigation
magaca Email website